Facecam & Screenshot Capture ဖြင့် Screen Recorder Android အတွက် Android APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Facecam & Screenshot ဖမ်းမှုနှင့်အတူ Screen Recorder
Facecam & Screenshot နှင့်အတူ Screen Recorder APK ကို Capture
ပါဝါခလုတ်ကိုမပါဘဲ facecam နှင့်ဖမ်းယူစခရင်ပုံနှင့်အတူဖန်သားပြင်အသံဖမ်း၏လျှောက်လွှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းတင်မျက်နှာပြင် app ကိုအသုံးပြုခြင်း, သငျသညျအငြိမ့်သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်စုတစုကိုမျက်နှာပြင်ဗီဒီယို, ချစ်မြတ်နိုးတဲ့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု၏မျက်နှာပြင်ဖမ်းယူဗီဒီယို, ဂိမ်း၏စံချိန်ကိုမျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်
အဆင်ပြေပြေနဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူကြောင်းယခုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအသံဖမ်း app ကို အသုံးပြု. အခါသင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင် app ကိုသုံးစွဲဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်သေချာပါသည်။
start ရန်, စံချိန်မျက်နှာပြင် app ကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ
ဂိမ်းအသံဖမ်း app ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ
1 ။ ဗီဒီယိုကို screen ကိုအသံဖမ်း
★မျက်နှာပြင်တွင်ရေပေါ် key ကိုအသံနှင့်အတူအလွယ်တကူဗီဒီယိုရိုက်မျက်နှာပြင်မှပြသပါလိမ့်မည်
★ဆိုင်းငံ့ / ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မျက်နှာပြင်လည်ပတ်
★စံချိန်မျက်နှာပြင်စဉ်အတွင်း / ရှေ့ကင်မရာကိုချွတ်အပေါ် Turn
2 ။ တစ်ဦးပုံယူ
screen ပေါ်မှာစခရင်ပုံခလုတ်ကိုနှင့်အတူ★ Capture အကဗီဒီယိုစခရင်ပုံ
★မျက်နှာပြင်, shot တစ်ခုတည်းထိတွေ့နှင့်အတူမည်သည့်ဖုန်းဖမ်းယူ
3 ။ Edit ကိုဗီဒီယို
★ Edit ကိုမြန်ဆန်စွာနှေးကွေးသောဗီဒီယို
★မိတ်ဆက်ခြင်း, outro Add ...
4 ။ Edit ကိုဓာတ်ပုံများ
★ Flip ဓာတ်ပုံများ
အရည်အသွေးမြင့်မား, ရှင်းလင်းသောအသံနှင့်♥ Recorder မျက်နှာပြင်အသံဖမ်း
ကိုယ့်တဦးတည်းထိတွေ့နှင့်အတူ♥ Voice ကို screen ကိုအသံဖမ်း
♥ Floating key ကိုစစ်ဆင်ရေးပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်
♥ပါဝါခလုတ်ကိုမပါဘဲ screenshots များကိုယူ
အသံနှင့်အတူဖန်သားပြင်အသံဖမ်းအသုံးပြုရလွယ်ကူမျက်နှာပြင်အသံဖမ်း hd ကိုအရည်အသွေးအပလီကေးရှင်းများ♥ Nice interface ကို,
♥အသေးစားဂိမ်းမှတ်တမ်းတင် app ကိုစွမ်းရည်မြန်ဆန်တင်
အခုတော့အများဆုံးအထင်ကြီးဗွီဒီယိုကိုမျက်နှာပြင်ဖန်တီးပါ။ သူတို့ကို trolls ရန်သင့်မိတ်ဆွေမျက်နှာပြင်မကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှတ်တမ်းတင်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ တဖန်သင်တို့လည်းအတူတကွတွေ့ကြုံခံစားရန်သင့်အသံဖမ်းမျက်နှာပြင်, shot app ကိုသူငယ်ချင်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုငျသညျ။
သငျသညျကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု app ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဘယ်လိုမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကအောက်ပါမှတ်ချက်စွန့်ခွာပါ။ ဒီ application development team ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုရန်သင့်အလှူငွေလေးစားပါသည်။
ပို. ပင်ကြီးမြတ်ထုတ်ကုန်ကိုဖန်တီးရန် developer များအားပေးဖို့5* ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်!
Facecam & Screenshot ဖမ်းမှုနှင့်အတူ Screen Recorder
14.99 ကို MB
Hudson က Parker